Vahiny izay tsy Menatra Maneho ny Fomba Mora mba Hahazatra Ny amin'ny Ankizivavy ao Shina
Vahiny izay tsy Menatra Maneho ny Fomba Mora mba Hahazatra Ny amin’ny Ankizivavy ao Shina
Ny lahatsary mampiady hevitra ny Amerikana ny olona manazava ny fomba tsotra dia ny firaisana amin’ny Sinoa vavy nahazo ny maro ny fanehoan-kevitra avy amin’ireo mpampiasa aterineto. Sosokevitra momba ny Toque, fampiharana finday izay mivarotra ny firaisana ara-nofo kilalao an-tserasera, namokatra lahatsary iray izay starred fotsy lehilahy milaza ny tenany ho an American.
Na izany aza, izy dia tsy nitafatafa noho ny tantaram-piainany, nefa noho ny zava-niainany amin’ny Sinoa ny ankizivavy Dia nandeha nandritra ny notsapaina sy nosedraina amin’ny fomba ahoana no effortlessly haka Sinoa vavy amin’ny fisotroana. Jack, izay miaiky fa manana mpijery ny amin’ny manodidina Shinoa ny ankizivavy satria ny hetsika efatra taona lasa izay, nilaza fa vahiny iray ihany no tokony mipetraka sy miandry ny zazavavy mba ho tonga.
Mba hanaporofoana ny fanambarany sy hamafa ny mpanao fanadihadiana ny fisalasalana, Jack nandeha avy hatrany eo amin’ny asa
Amin’ny fakan-tsary miafina mifantoka amin’ny azy izy raha nipetraka teo amin’ny café, ny lahatsary nampiseho ny Sinoa efatra vehivavy manatona»Jack», ny fahazoana ny fifandraisana isa, ary aza maka sary miaraka aminy.
Na izany aza, inona no tsikaritra hatrany am-piandohana no mila mampiasa ny endrika saron-tava sy nanjavozavo ny zavatra nosoratany ny tavany
Ny zavatra iray hafa izay niavaka dia ny tsy-ka-tena Amerikana lantom-peony, izay iray YouTuber naneho hevitra fa mety ho anarana lantom-peony. Jereo koa ny Ryan Ankapobeny mediatrix, Matavy-manala-baraka ny haino aman-Jery Sosialy Tetikady ao Filipina avy Hatrany Mahazo nakaton’ny mpampiasa aterineto Ny lahatsary efa nandray tapitrisa ny fomba fijeriny sy efa nahazo maro mankahala ny fanehoan-kevitra. Araka Shanghaies, maro ny mponina ao an-toerana dia samy tezitra noho izany ireo vahiny iza no mandray soa avy ny mampiaraka toerana ao Shina sy ny fanompana ny lahatsary. Manaraka Antsantsa no mitarika ny loharanom-nandrakotra Aziatika Vaovao Amerikana sy Aziatika Vaovao ao anatin’izany ny raharaham-barotra, ny kolontsaina, ny fialam-boly, ny politika, ny teknolojia sy ny fomba fiainany. Manaraka Antsantsa no mitarika ny loharanom-nandrakotra Aziatika Vaovao Amerikana sy Aziatika Vaovao ao anatin’izany ny raharaham-barotra, ny kolontsaina, ny fialam-boly, ny politika, ny teknolojia sy ny fomba fiainany
Tsy Hanambady Sinoa Vehivavy Tsy Mahalala Ireo Soso-kevitra →